यौ’नाङ्गको रौं हटाउँदा के हुन्छ ? हटाउँन हुन्छ कि हुदैन, जान्नुहोस् ? – Hamro Nepali Samachar
Home/ बिबिध/यौ’नाङ्गको रौं हटाउँदा के हुन्छ ? हटाउँन हुन्छ कि हुदैन, जान्नुहोस् ?
ग्रीष्म याममा वृद्धिदर बढी हुने भए पनि यो न्यून नै हुन्छ। यौ’न अं’गमा आएका रौं पनि यौ’नक्रिया’कलाप तथा यौ’नसम्प’र्कका लागि बाधक हुँदैनन्कतिपयका लागि यी यौ’नकेश यौ’न आकर्षक हुनसक्छन्, जसले यौ’नसम्प’र्कलाई सहयोग नै पुर्‍याउँछ। यौ’न केश आकर्षक हुने भए पनि कतिपयलाई यो मन पर्दैन। पहिरन र जीवन शैली फरक(फरक भएजस्तै व्यक्तिअनुसार शरीरमा भएको रौंलाई कसरी राख्ने वा सजावट गर्ने भन्ने कुरा फरक पर्छ।
का’खीमुनिको रौं खौ’रिने चलन विशेषतः युवतीहरूमा बढ्दो छ। नेपाल मा नसुनिए पनि पश्चिमा मुलुकमा यौ’न के’श ९यौ’नअंग वरिपरि को केश० लाई सजावट गर्ने वा खौरने चलन छ। रौं निकै लामो भए खौरिनु पहिले नै छोट्टयाउनुपर्छ। खौरिँदा प्रयोग गरिने क्रिम पर्याप्त लगाउनुपर्छ, जसले गर्दा रौं नरम होस्। एल’र्जी नहुने किसिमको यस्तो क्रिमको प्रयोग अनिवार्यजस्तै मानिन्छ। ब्ले’ड एकदम धारि’लो हुनुपर्छ, जसले गर्दा छाला नपा’च्छियोस् ।